Shirka dib u eegista socdaalka oo ka furtay Cadaado | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Shirka dib u eegista socdaalka oo ka furtay Cadaado
Shirka dib u eegista socdaalka oo ka furtay Cadaado
Magaalada Cadaado ee Caasimadda KMG ah ee Maamul-goboleedka Galmudug ayaa waxaa maanta ka furmay Shirka Wadatashiga Dib u eegita Shirciga Socdaalka Soomaliya, waaxana shirkani daahfuray la taliyaasha dhanka sharciga ee Hey’adda SOcdaalka iyo Jinsiyadda C/nasir Hashi iyo Safiya Shire.
Shirkan oo ay ka soo qeybgaleen masuuliyiin ka socotay xildhinaada iyo wasiirada Galmudug oo ay ka mid yihiin wasiirka arimaha Gudaha, Wasiirka Maaliyada, Wasiirka Dastuurka iyo Wasiirka Gadiidka cirka iyo dhulka, waxaana ay dhamaantood si isku mid ah u sheegeen in ay muhiim tahay in dib u eegis lagu sameeyo sharciga Socdaalka dalka, maadama sharciga hada jira markii la sameenayay uu dalku ahaa dowlad dhax, balse hadda la qaatay nidaamka Federaalka.
Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa dhawaalahaanba ku jirtay dadaalo lagu doonayo in dib loo howgaliyo dhammaan xafiisyo ku kala yaal Gobolada Dalka iyo dib u eegista Sharciyada Socdaalka, iyadoo Agaasimaha Hey’addaasi uu dhawaan kormeer ku sameeyay Xafiisyada Hey’addaasi ku leedahay Magaalooyinka Dooloow, Beled Xaawo, Boosaaso iyo kuwa kale.
Previous articleGalmudug Oo U Diyaarsan Soo Dhaweynta Madaxweynaha Dalka.
Next articleSoomaaliya iyo Turkiga oo heshiisyo iskaashi wada saxiixdey